Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Community Shield Ee Chelsea v Manchester City. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Community Shield Ee Chelsea v Manchester City.
Juan Mata ayay u badan tahay inuusan u ciyaari doonin Chelsea ka dib markii uu ka qeyb qaatay ciyaarihii Olimbikada, sidaasi darteed Di Matteo waxaa laga yaabaa inuu doorto qaab ciyaareedka 4-3-3, iyadoo Raul Meireles uu kula biiraya Frank Lampard iyo John Obi Mikel khadka dhexe.
Ramires iyo Eden Hazard ayay u badan tahay inay weerarka ku caawin doonan Fernando Torres, halka tababaraha Talyaaniga uu kala go’aansan doono cidii uu daafac dhexe ku soo bilaabi lahaa Gary Cahill ama David Luiz. Marko Marin ayaa kulankaan ku seegi doona dhaawac.
Roberto Mancini ayaan weli garoon soo gelinin line-upkiisa rasmiga ah intii lagu guda jiray ciyaarihii saaxiibtinimo, taasoo sii adkeyneysa in la saadaaliyo sida uu u soo xulan doono ciyaartoydiisa kulankaan.
Taam ahaanshaha qaar ka mid ah ciyaartoydii ka soo qeyb qaadatay Euro 2012 sida Samir Nasri iyo Nigel de Jong ayaa ah mid uu shaki ku jiro, halka Vicent Kompany uu ka soo kabsanayo dhaawac ayna u badan tahay inaan riski la gelin doonin, sidaasi darteed Kolo Toure ayaa laga yaaba inuu ciyaaro.
David Silva iyo Mario Balotelli ayaa wadamadooda la gaaray ilaa finalkii Euro 2012, waxaana sidaasi darteed laga yaabaa in lagu soo bilaabo keydka.
Yaya Toure, Sergio Aguero iyo Carlos Tevez ayaa dhamaantood ka qeybgalay ciyaarihii saaxiibtinimo ee kooxda, sidaasi darteed waxaa la filayaa inay qeyb ka noqon doonaan line-upka kulanka maanta, lakiin Gareth Barry ayaa dhaawac ku maqan, halka Micah Richards oo ka soo qeyb qaatay ciyaarihii Olimbikada laga yaabo in la nasasiiyo.
Manchester City ayaa guuldarro 3-2 ah ay ka soo gaartay Manchester United sannadkii hore koobka Community Shield, lakiin waxa ay koobkaan ku guuleysteen seddex jeer, 1937, 1968 iyo 1972.
Villa Park, garoonka kooxda Aston Villa ayaa martigelin doona sannadkan, iyadoo Wembley loo isticmaalayo ciyaaraha Olimbikada ee ka socda London.
Kulankaan ayaa lagu ciyaarayaa meel ka baxsan garoonka qaran, Wembley-gii hore iyo Wembley-ga cusub ama Millennium Stadium markii ugu horeysay tan iyo 1973dii markaasoo lagu ciyaaray garoonkii hore ee Man City Maine Road.
Maine Road hosted the match five times in all, while the game has been played at Chelsea’s Stamford Bridge more than any other stadium bar Wembley.
Chelsea ayaa garoonkeeda ku garaacday City xilli ciyaareedkii hore Premier League, lakiin guuldarro ay ku soo gaartay Etihad Stadium isla natiijada 2-1.
Guud ahaan, Blues ayaa iska leh gacanta sarre marka ay timaado kulamada fool ka fool ah ee ay kulmeen, Chelsea waxa ay badisay 55 kulan, 43 kulan waxaa badisay City, halka 36 kulan ay barbaro ku kala baxeen.
Chelsea waxa ay ku guuleysatay Community Shield afar jeer, iyadoo seddex ka mid ah ay ku guuleysteen qarnigaan 21aad, 2000, 2005, iyo 2009. Sidoo kale waxa ay ku guuleysteen 1955.
Roberto Di Matteo, ayaa ciyaartiisii ugu horeysay ee tartan rasmi ah ee isagoo ah tababaraha joogtada ah ee kooxda waxa uu hogaamin doonaan Chelsea, waa tababarihii afaraad ee majaraha u qabta Stamford Bridge ee Talyaani ah ka dib Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri iyo Gianluca Vialli.
Sadaal ka bixi yaa ku guuleysan doona maanta kulanka Community Shield ee Chelsea v Manchester City?